Ururka - World March
Toban sano ka dib 1ª World March hay'adeenu waxay ku noqotaa inay sii wado gaadho dad badan
La 1ª Aduunka March ee loogu talagalay Nabadda iyo Dagaalka Waxa uu ku dhawaad ​​kun jeer kudhacay magaalooyinka 400 oo uu ka soo safray wadamada 97 ee qaaradda 5. In ka badan ururada 2000 ayaa ka qayb qaatay. Qiyaastii laba boqol kun oo km ayaa la safray waxaana boqolaal kun oo qof ay ka qayb qaateen.
Iyada oo khibrad urursan oo lagu xisaabtamayo tilmaamayaal ku filan oo leh xitaa ka-qaybgal ballaaran, taageero iyo iskaashiyo ... Waxaa la qorsheynayaa in la fuliyo 2da Maarso ee Adduunka ee Nabadda iyo Xag-jirnimada 2019-2020.
Haddii aad rabto inaad wax dheeraad ah ka ogaatid 1F March waxaanu heysanaa xoogaa khayraad ah oo aan ku siin karno:
Waxaad soo dejisan kartaa lacag la'aan Bisha March kuwaas oo soo ururiya qaar ka mid ah qaybaha ugu fiican ee ficilkan weyn.
Waxaad si faahfaahsan uga ogaan kartaa wixii ku dhacay bogga hore ee kan 1ª World March
Maxay tahay? Howlgalkeena
Si looga hadlo xaalada dunida ee khatarta leh ee colaadaha sii kordhaya, kharashka kordhaya ee hubka ah inta lagu jiro meelaha ballaaran ee meeraha ah ee dad badan ayaa dib loo dhigay sababo la'aanta cuntada iyo biyaha.
Abuuritaanka wacyi gelin
Si loo sii wado abuuritaanka wacyi-galin ah in ay tahay kaliya "nabad" iyo "colaad" in noocyada aadanaha ay furi doonaan mustaqbalkiisa.
Muuqaal aad u weyn
Si aad u arki falalka wanaagsan oo kala duwan oo kala duwan in shakhsiyaad, kooxo iyo dadyow kale waxaa lagu soo koraya ee meelo badan oo dhinaca fulinta xuquuqda aadanaha, non-takoorka, iskaashi, wada noolaansho nabad ah oo aan gardarada.
Si aad u sheegto jiilalka cusub ee raba in ay la wareegaan oo ay ka tagaan calaamadahooda, ku xirnaanta dhaqanka aan rabshad lahayn ee maskaxda guud, waxbarashada, siyaasadda, bulshada dhexdeeda ... Si la mid ah dhowr sano gudahood wacyi galinta xayawaanka
Kooxaha Hormarinta (EP) ee ka soo bixi doona ficilada iyo mashaariicda ay ka soo qaadaan saldhigga arrimaha bulshada, iyada oo ruuxa "qof waliba uu daryeelayo waxa uu soo jeedinayo".
Wadamada leh PE ee magaalooyinka dhowr ah, Kooxda Horumarinta Dalabka ayaa la dhisi doonaa. EP-yadaas, ururo badan oo dadku ka qaybqaadan karaan.
PEs Kuwaas waxaa la siin doonaa hab iyo qaab shaqo, qadarin, dabeecad iskaashi iyo isku dheelitir si laysugu keeno waxqabadyo.
Hawlaha Taageerada (PA)
Waxay sidoo kale ka kooban yihiin dad, kooxo iyo xitaa hay'ado.
Kuwani waa qayb ka mid ah ka-qaybgalka kuwaas oo ka sii ballaaran oo ka duwan kala duwanaanshaha EP-yada, halkaas oo waxqabadyo badan oo la heli karo, tusaale ahaan qaybaha (barayaasha, dhalinyarada, haweenka) ama meelaha (deriska, magaalada, jaamacadda), iwm.
Qeybta PA waxay daruuri u noqon kartaa wakiil ama xiriir la leh EP ee magaalada.
In la isku duwo kala-duwanaanta kala duwanaanshaha, jadwallada iyo goobaha, goobaha isuduwidda caalamiga ah ee u dhexeeya dalalka iyo gobollada ayaa loo baahan yahay.
Goorma iyo meesha?
La 2ªMM wuxuu bilaabi doonaa Madrid el 2 Oktoobar, 2019, Maalinta Caalamiga ah ee Xadgudubka, toban sano kadib 1ªMM. Waxay ka tegi doontaa jihada Afrika, Waqooyiga Ameerika, Bartamaha iyo Koonfurta, inay ku boodaan Oceania, tag Asia iyo ugu dambeyntii Yurub, gaadho Madrid markay tahay 8 Maarso, 2020, Maalinta Haweenka Adduunka. Kadib markuu meeraha ku wareego muddo dhan 159 maalmood. Waxaa lagu qiyaasaa in 2ªMM Waxay sii wadi doontaa in ka badan dalalka 100 oo boqolaal kun oo ah dhaqdhaqaaqeyaashu ka qayb qaadan doonaan tallaabadan caalamiga ah.